Immisa daqiiqo ayuu Lionel Messi saxaafadda la hadlay kadib guuldaradii xulkiisa kasoo gaartay dhigooda Colombia? – Gool FM
(Brazil) 17 June 2019. Kabtanka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa wali la kulmaya culeysyadii uu waligiis ku dhex jiray ee qabsan jiray marka uu maaliyadda wadankiisa xiran yahay, guuldaradii ay ku furteen Copa America ayaa keentay in mar kale la dhaleeceeyo.
Lionel Messi waxaa lagu soo warramayaa inuu ku qarash gareeyay la hadalka saxaafadda kadib guuldaradii kasoo gaartay Colombia (40-daqiiqo), natiijadu waxey aheyd guuldaro, niyad jab yar, balse kabtanka wuxuu isku dayay inuu ka jawaabo dhaman su’aalaha kaga yimid saxaafadda.
“Waa inaan guul ka gaarno Paraguay” ayuu yiri Messi, “Taasi waxey noo ogolaaneysaa inaan kulanka qatar go’aamin karno usoo bixitaanka wareega xiga”
Lionel Messi wuxuu kula guuleystay Barcelona wax walba, balse wali dhibaato ayaa ku heysta qaranka maadaama uusan wali tartan weyn kula guuleysan isagoo ku jira heerka sare.
Si kastaba Lionel Scaloni iyo ciyaartoysiisa cusub ee qibradda leh waxaa laga yaabaa iney ka saacidaan Messi inuu markii ugu horreysay ku guuleystay koob heer qaran ah, walow Ronaldo oo tartan adag uu tobankii sano ugu dambeeyay kula jiray uu laba koob ka heysto dhanka qaranka.